Archive du 20170809
Fifidianana 2018 Efa nifanaraka Rajao sy ny Frantsay ?
Miha mazava ny resaka ankehitriny fa mety ho anisan’ireo kandida ho tohanan’i Frantsa amin’ny 2018 ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina ;telo volana aty aorian’ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nnataon’ity farany tany Paris mantsy ka nandraisan’ny filoha Emmanuel Macron azy tao amin’ny lapan’i Elysée ny 28 jona 2017
Komity hampihavana ny firenena Hanomboka anio ny fifantenana
Nanao ny tatitry ny asa vitan’izy ireo tao anatin’izay 2 volana nijoroany izay tetsy amin’ny foibeny etsy Antaninarenina omaly ilay rafitra voatokana hifantina ireo izay handrafitra ny komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM).
Tsy nitsitsy fitenenana ny mpahay diplomasia, Julien Radanoara, nanatsikafona ireo tsy fihetezan-javatra rehetra misy eto amin’ny firenena na eo amin’ny lafiny lalàna izany, fa indrindra teo amin’ny resaka zon’olombelona. Efa lasa zo mahafaty (droit à la mort), hoy izy, no misy eto fa tsy zo hiaina intsony (droit à la vie).
Politikam-panjakana Mila hampihavanina amin’ny hetahetam-bahoaka
Mila alamina ny savorovoro misy eto amin’ny firenena amin’izao herintaona mialohan’ny fifidianana filohan’ny Repoblika izao, hoy ny AKFM (Antokon’ny Kongresin’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara).
Kolikoly avo lenta tany Israel Tafidi-kizo ny filoha Malagasy
Voatonona ao anatin’ny raharaha kolikoly mahasaringotra ny praiminisitra Israelianina Benyamin Netanyahou ny filoha Malagasy Hery Rajaonarimampianina, araka ny vaovao navoakan’ny Gazety Israelianina iray antsoina hoe “Le Temps”, nivoaka ny 6 aogositra lasa teo.
Alain Ramaroson Migadra sady mandoa volabe
Sazy mihatra 30 volana an-tranomaizina miampy onitra 200 tapitrisa ariary no azon’i Alain Ramaroson momba ny raharahan-tany teny Ambohimangakely, araka ny didim-pitsarana navoakan’ny tribonaly Anosy tao amin’ny efitrano faharoa omaly 8 aogositra 2017.
Fanadiovana an’Antananarivo Esorina ireo « 4’mi » teny Anosy sy Anosibe
Ny alatsinainy alina teo nanomboka tamin’ny 8 ora sy sasany ny fanentanana sy fampilazana ary fampitandremana ireo « 4’mi » teny amin’ny faritra Anosizato atsinanana,
Baolina kitra Malagasy Hetsika 3 samihafa no indray hiseho etsy Mahamasina anio
Hetsika 3 samihafa eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra Malagasy no indray hiseho ka harahin’ny mpanakafy an’ity taranja ity anio alarobia 9 aogositra etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina.
Manomboka ny hazakazaka amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Efa maro ny milaza fa hirotsaka, saingy any amin’ny ora farany no hitsarana hoe tena sahy tokoa sa mitsapa ny halalin’ny rano
Fitsaboana ny “Hépatite B Mila 1 tapitrisa Ar isan-kerinandro
1 tapitrisa Ar isan-kerinandro raha kely ny vola ilaina ho an’ireo mararin’ny aretina Hépatite B eto amintsika, raha araka ny fanazavan’ny profesora Rakotovao Luc ;
2018 sy vola vaovao Ahian’ireo mpandinika ho misy hifandraisany
Tsy ampy 1 volana izao dia niharihary fa efa tsy voafehy sahady ny fiparitahan’ny sandoka amin’ireo vola vaovao navoakan’ny banky foiben’i Madagasikara. Isan’ny nahitana izany farany teo ny tao Sambava fa efa tsy ambakan’izany koa ny ao Nosy be,
Taranja Anglisy eny amin’ny Lisea Hiova ny fandaharam-pianarana
Ho fidirana mian-dalana mankany amin’ny drafi-panabeazana vaovao (PSE) dia hiova tanteraka ny fandaharam-pianarana ho an’ny taranja Anglisy manomboka amin’ny taom-pianarana vaovao ho avy io.
Fiverenana eo anivon’ny fiarahamonina Voafonja 20.000 notohanan’ny Handicap International
Tafakatra 20.000 isa manerana ny Nosy ankehitriny. Ny 96 %-n’izy ireo anefa no mbola manana fanantenana feno ny amin’ny hiverenany soa aman-tsara eny anivon’ny fiaraha-monina, indrindra taorian’ny nanampian’ ny fikambanana Handicap International azy ireo.